Ahoana no ahitanao ny rindran-kira izay manondro ny tranokalanao?
Backlinks dia foiben'ny fitadiavana motera. Manana ny fiantraikany manan-danja indrindra eo amin'ny sehatry ny toerana izy ireo. Na dia izany aza dia mitaky fotoana betsaka, ezaka maro ary indraindray vola mba hikaroka rindran-kira tsara ho an'ny fampiroboroboana amin'ny aterineto. Ny iray amin'ireo fahasarotana lehibe indrindra ho an'ny manampahaizana SEO dia mihazona ny fanaraha-maso ny backlinks izay efa napetraka. Sarotra be ny manamarina avy eo amin'ny toerana ahafahanao miverin-dàlana, izay toerana misy ny rindrankajy, ary nahoana no tsy misy fiantraikany amin'ny toerana misy anao.
Ny fanaraha-maso an-doha ny Backlink dia iray amin'ireo asa sarotra indrindra amin'ny fananganana rohy izay tena manan-danja tokoa ho an'ny fanatsarana ny tranokalan'ny tranonkala. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny antony maha-zava-dehibe ny fanaraha-maso ny backlink ary ny fomba ahafahanao mahatsapa hatrany ny backlinks misy anao ankehitriny.
Fanitsiana bakalava hafa
Eritrereto ny toe-javatra iray rehefa nahita rohy lehibe avy amin'ny famoaham-baovao lehibe tamin'ny fotoana lasa, saingy tsy manana ny sandany amin'ny SEO ianao ho toy ny tranonkala izay nametrahanao ny rohy napetraka tamina tamba-jotra, ary tsy misy ny rohy avoakanao tsara. Heveriko fa ity toe-javatra ity dia mahazatra ny habetsahan'ny mpamorona tranonkala. Mba hisorohana ireo toe-javatra mampalahelo toy izany, dia tokony hanara-maso ny backlinks foana na dia efa napetraka taona maro lasa aza. Mazava ho azy, saika tsy azo atao ny manara-maso ireo rohy ivelany rehetra. Izany no antony tokony hampiasanao fitaovana maoderina ho an'ity tanjona ity toy ny Semalt Auto SEO na SE Ranking. Ohatra, ny Semalt dia hanome anao fampandrenesana isaky ny misy fanovana sasany atao any aoriana. Amin'ny fampiasana an'io fitaovana io dia azonao atao mora foana ny manamarina raha toa ka misy fiantraikany tsara eo amin'ny tranokalanao ny rohy misy anao. Hahazo famelabelarana amin'ny antsipiriany ianao amin'ny alàlan'ny fanamarihan-tserasera toy ny "Alexa", ny rohy ivelany hafa, loharanon-tseraseran'ny Google bots, ny fanamafisana ny fanamafisana, ny fizarana Google, ny fahefan'ny sehatra ary ny sisa.Ireto manaraka ireto dia manome safidy farafaharatsiny azo isafidianana.
Backlinks dia afaka manome tombontsoa lehibe ho an'ny tranonkala SEO na ny mifamadika amin'izay manimba ny lazanao. Mba hisorohana ny fialan-tsasatra, mila mahita rindran-damina ianao, izay mety hampidi-doza ny fampielezan-tsarimihetsika fikarohana ataonao ary hanafoana ny rakitra rehetra mahatsiravina amin'ny fotoana. Ampiasao ny Semalt Auto SEO, dia hahazo ny tatitra momba ny backlinks kalitao ianao. Manoro hevitra anao aho mba handinika manokana ireo backlinks izay avy amin'ny filokana, olon-dehibe na olon-kafa mety hisalasala izay tsy tokony hametraka ny rohy misy ny tranokala. Ilainao ny mamafa ireo rohy ireo raha haingana amin'ny fampiasana Google Disavow Tool.
Hanara-maso ny fanondroanao fanondroana
Tokony hanara-maso ny loharano avy any amin'ny fiverenanao ianao, fa koa ireo lahatsoratra fanoratana farany ny rohy misy anao. Ny profilitry ny rohy tsy ara-dalàna dia mety hampisy sazy Google. Mila mandanjalanja sy manara-maso ireo vatofantsika rohy ianao mba hiarovana ny tranonkalanao tsy ho lanjany loatra amin'ny rohy misy ny sokajy mazava Source .